ဆက်သွယ်ရေးတာဝါ၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါဒီဇိုင်း၊ မိုဘိုင်းအင်တင်နာတာဝါ - XY မျှော်စင်
XY Tower သည် တရုတ်ပေါင်းစပ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် အမျိုးမျိုးသော လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များကို ပြည်တွင်းနှင့် ပင်လယ်ရပ်ခြား စွမ်းအင်အသုံးချကုမ္ပဏီများနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားသော စက်မှုဖောက်သည်များထံ ပေးဆောင်ပါသည်။
XY Tower သည် ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်/တိုင်၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်/တိုင်၊ ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပုံနှင့် လမ်းမီးတိုင် စသည်တို့တွင် အထူးပြုထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ထရန်စဖော်မာထုတ်လုပ်သူ၊ ဆီလီကွန်စတီးပြားထုတ်လုပ်သူနှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ အရေးပါသောရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ .
ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများအား ယုံကြည်စိတ်ချရသော လျှပ်စစ်ပေးဝေမှုကို ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
96 LED 50W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းဘေးမီးအိမ် အပြင်ဘက်...
ဆိုလာလမ်းမီးများကို ပုံဆောင်ခဲအဖြစ် ဆီလီကွန် ဆိုလာဆဲလ်များဖြင့် စွမ်းအင်ပေးပါသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခမဲ့ဆို့ရှင်ထိန်းချုပ်ထားသော အလုံပိတ်ဘက်ထရီများ (ကော်လိုဒိုင်းဘက်ထရီ) သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်သည်။ အလွန်တောက်ပသော LED မီးချောင်းများကို အသုံးပြု...
330kV M-Type ဓာတ်အားလိုင်းတာဝါ
XY Tower သည် တရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ တာဝါတိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောဗို့အားမြင့်မျှော်စင်နှင့်သံမဏိတည်ဆောက်ပုံအတွက်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ & တင်ပို့သူ, ယခုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပါ။
ဤနေရာကိုကြည့်ပါ၊ ထူးချွန်ထက်မြက်သော 10 နှစ်၊ ပြည်ပပို့ကုန်အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော၊ သွယ်တန်းသည့်တာဝါတိုင်၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခွဲရုံတည်ဆောက်ပုံတို့ကို အထူးပြု၍ အသေးစိတ်ကို ယခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ website သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ XY Tower သည် တရုတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရှိ တာဝါတိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ XY Tower သည် အမျိုးမျိုးသော သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ tran...
Transmission line tower သည် conductor များ၊ conducto များကြား သတ်မှတ်ထားသော ဘေးကင်းသော အကွာအဝေးကို ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် overhead conductor များ၊ light wires များနှင့် အခြားသော accessories များကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် tower structure တစ်ခုဖြစ်သည်။
330kV double loop terminal မျှော်စင်
⦁ ကမ္ဘာကြီးကို ချိတ်ဆက်ရန် မျှော်စင်များ ကမ်းလှမ်းခြင်း ⦁ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို လူတိုင်းထံ အကောင်းဆုံး ယူဆောင်လာ ⦁ ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်အတွက် မျှဝေထားသော ချိတ်ဆက်မှုကို တည်ဆောက်ပါ
နောက်ဆုံးရသတင်းများအရ ယခုနှစ်အတွင်း သံမဏိဈေးနှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများမှာ ရာ...
2021 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့တွင် 500 kV ဗို့အားမြင့် သွယ်တန်းထားသော တာဝါတိုင်များ အပြန်အလှန် တပ်ဆင်စမ်းသပ်ခြင်း...
ယခုတစ်ပတ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့ကြီးများတွင် သံမဏိဈေး သည် 10 မှ 17 အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တက်ကြွစွာ ပေါင်းစပ်ထားသော ပါဝါကုမ္ပဏီတစ်ခု
ပြည်ပဓာတ်အား သွယ်တန်းခြင်းဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များစွာတွင် ပါဝင်ခြင်း။ ဓာတ်အားလိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုင်မီးထွန်းခြင်း၊ ဓာတ်အားပေးစက်များ တင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အထူးပြုဆောင်ရွက်သည်။
⦁ တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် အကြီးဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တာဝါတိုင် တင်ပို့သူ
⦁ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်များနှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်မြန်ဆန်သော ထုတ်လုပ်မှုကို သေချာစေသည်။
⦁ ပျမ်းမျှလုပ်သက် အနှစ် 20 ရှိသော အင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့
⦁ ပြည်ပဈေးကွက်အတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
⦁ အရည်အသွေးသည် XYTower အတွက် ဦးတည်ရာမဟုတ်သော ခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
⦁ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် QC အဖွဲ့ဖြင့် 14 နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီး ISO / CE / ASTM / UL အောင်လက်မှတ်